Matongerwo eNyika, 26 Kurume 2018
Muvhuro 26 Kurume 2018
National Parks Inoti Yapa Mapurisa Humbowo hweKuti Amai Mugabe Vaishandisa Vasori Mukuita zveHuori paNyaya yeNyanga dzeNzou
Vebazi rekuchengetedzwa kwemhuka reZimbabwe National Parks and Wildlife vanoti vapa mapurisa humbowo hunoratidza kuti Amai Grace Mugabe, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika VaRobert mugabe vaiita zvehuori pakuburitswa kwenyanga dzenzou munyika vachishandisa vakuru vevasori.
America Yozeya Mutemo Wekubvisa Zvirango Zvakatemerwa Vamwe Vakuru muHurumende
Dare reparemende yeAmerica riri kuzeya mutemo wekubvisa zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, uye nhengo dzeparamende yenyika iyi dzinoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuti zvirango izvi zvibviswe.
VaEmmerson Mnangagwa Vokwezva VeMabhizimisi kuIvory Cost Kuti Vauye Kuzovhura Mabhizimisi MuZimbabwe
Mutungamiriri wenyika VaEmwerson Mnangagwa neMuvhuro vakapinda mumusangano wevakuru vemakambani emu Africa we Africa CEO Forum uri kuitwa kwemazuva maviri ku Abidjan, kuIvory Coast.
VaChamisa Vovimbisa Vagari vekuMaruwa Huchi neMukaka kana Vakakunda Musarudzo
VaChamisa vakatiwo vana vechikoro vedzidzo yepasi vachange vave kudzidza pachena kana vachinge vapinda muhurumende.
Kurume 25, 2018
VaChamisa Votaura nezveMusangano Wavo paNzvimbo kuMash. Central
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC-T VaNelson Chamisa nemusi weSvondo vakaenderera mberi nekuita misangano vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rino.
VaMnangagwa Vokundikana Kumisa Kuramwa Mabasa kwaVanaChiremba
Kuramwa mabasa kwavanachiremba kuri kuenderera mberi kunyangwe hazvo zviri kunzi mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kunzi vakavakumbira kuti vadzokere zvichemo zvavo zvichitariswa.
Amai Mugabe Vanoti Nyaya yeKuda Kusungwa Kwavo Ine Chekuita nezveMatongerwo enyika
Bepanhau reSunday Mail rinoti mudzimai wevaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, Amai Grace Mugabe vari kuferefetwa nenyaya dzehuori pakutengeswa kwemangoda, goridhe uye nyanga dzenzou.
VaChamisa Vanoita Musangano kwaMurehwa, Nzvimbo Yagara Iri yeZanu PF
Vachitaura pamusangano uyu, VaChamisa vati hurumende yavo ichaona kuti matunhu ose asimudzirwa uye munhu achigara munyika zvine chiremera, pasina kumanikidzwa kuita zvinhu zvausingadi, izvo vati zviri kuitwa nehurumende yeZanu PF.
Sangano reDicafo Rowana Rubatsiro Kubva kuKambani yekuSouth Africa
Mukuru wekambani ye CTI, Va Louw Parsons, vati kambani yavo yabatsira DICAFO nechinangwa chekusimudzira basa rakanaka richazenge richiitwa nesangano iri.
Zimbabwe Inocherechedza Zuva reChirwere cheRurindi Pasi Rose
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva rechirwere cherurindi, kana kuti World TB Day, pahurongwa hwaitirwa kuDzivaresekwa muHarare.
Huwandu hweVanhu Vakanyoresa Hwoitisa Zanu PF Mudumbu?
Amai Mupfumira vati bato ravo riri kushushikana zvikuru nehuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota mumaguta uhwo hwavanoti hwakanyanya nekudaro vanofanirwa kushanda nesimba kuti nhengo dzavo dzisati dzanyoresa kuvhota dzinyorese.